Ny fantsom-pivarotana varotra B2B: Mamadika ny tsindry ho mpanjifa | Martech Zone
Inona no atao hoe fantsom-pivarotana? Na amin'ny sehatry ny asa aman-draharaha (B2B) na ny orinasa ho an'ny mpanjifa (B2C) dia miasa ny orinasam-pivarotana mba hamaritana ny isan'ireo fitarihana izay ezahin'izy ireo hivadika ho mpanjifa. Izany dia manome azy ireo vinavina raha hanatratra ny tanjon'ny fikambanana izy ireo raha ny amin'ny fanisana sy ny sandany. Izy io koa dia manome departemanta ara-barotra miaraka amin'ny fahatsapana fa maika raha toa ka mitondra mpitsidika ampy na tsia ny mpitarika.
Orinasa B2B maro miasa eo amin'ny sehatry ny indostria no manana tsingerin'ny varotra lava kokoa. Ka ahoana no ahalalanao fa vonona ny hividy firaka? Infographic Pipeline an'ny varotra ActiveConversion mampiseho aminao ny fomba marina hampiasanao ny automatisation marketing hamadika ireo mpitsidika tranokala ho mpanjifa. Araho tsikelikely ny fantsom-pohy hahitanao ny fomba hahalalanao hoe avy aiza ny fitarihana ary rehefa vonona ny varotra izy ireo. Ny fandefasana ny fizotrany dia mamela anao hifantoka amin'izay zava-dehibe indrindra - miteraka varotra!
Ny fakana sary an-tsaina ny dia izay mamakivaky ny fantsom-pivarotana (sy ny fandrefesana ny dingana tsirairay) dia fanatanjahan-tena tena mandaitra mba handehanan'ny orinasa ary ity dia infographic mahafinaritra izay manao izany. Ny fitaovam-pitaterana maoderina marketing sy fitaovana fitantanana andramena dia manome ireo karazana fahitana ireo ary afaka manome isa aza fa mety hitarika any amin'ny dingana manaraka ny firaka.
ActiveConversion dia manampy amin'ny fanombanana ny dianao mitarika amin'ny tsingerin'ny fividianana hanatsarana ny ezaka amin'ny varotra ary koa ny valin'ireo hetsika ara-barotra.
Tags: fiovam-po mavitrikafiverimberenanafantsona b2bfantsom-barotra b2bfitorahana bilaogyakaikyvarotra akaikydata.comfipoahana mailakamailaka Marketingfitarihana mafanahamantatra orinasafantaro ny orinasamamantatra firakaandraikitra voatendryfamantarana famantaranascoring firakaLinkedIndoka an-tseraseralahatahiry amin'ny Internettelefaoninafamelabelaranafikarohanavarotra mandeha ho azyfantsom-pivarotanafikarohanafamantarana ny mpitsidikaWebinars
Dragon valisoa: amporisiho ny hevitrao sy ny teny marketing amin'ny vavanao